Ukudibana ne-Simplr • I-Strawr Camera Straps
ikhaya / Ngathi / Ukudibanisa i-Simplr
ezaposwa ngomhla Ngamana 24, 2017 Septemba 24, 2019 by Simplr
Xa ndifumene ikhamera engenakubukrabhu yokuqala, ndaye zonke Ndonwabile ukutshitshisa iDSLR yam. Ngesihlandlo sokuqala kwiminyaka, ndinekhamera enomlinganiselo onomgangatho wobungcali bobugcisa - kwaye ndivuyiswe ukulibhangqa kunye ngqo iqhosha elilungileyo.
Iminyaka eyi-30 ngaphambili, xa "ndiboleke" ikhamera yam, ikhonkco yashiya eninzi. Kwakunzima kakhulu kunokuba kuyimfuneko, ngakumbi kwi-35mm SLR encinci. Nangona kwakunokukhutshwa ngokukhawuleza, loo msebenzi wenziwe ngeekhompyutheni zengxube ezithinteleyo ezingaphantsi kwam ngesandla sam, kwaye zishiya ukupenda kwipende. Isityhi njengoko kwakunjalo, ukudibanisa zombini i-velor kwaye uboyiweyo, bekuya kuba yinto enjalo yexesha elide - ngokungathandabuzeki lilungelelaniswa nayiphi na inamba yeengqungquthela kule minyaka yeshumi elinesibini leminyaka elitsha leminyaka ...
... ngaphandle kwayo kwakungekho.
Ngokukrakra, zonke iingubo zanamhlanje zihlupheke ubuncinane kwimibandela endiyifumene kwiminyaka eyi-30 ngaphambili - ubuninzi obungabalulekanga, i-hardware engummiselo phantsi kwesandla sam (apho iyakhathaza kakhulu), okanye isinyithi esonakalisa ikhamera kunye namalensi - ngoko Ndagqiba ekubeni ndizenzele mna.
Ulungele ukusho, kwaphuma okuhle kakhulu ... kulungile ngokwaneleyo ukwenza ezinye.
UMlawuli weCandelo, u-Simplr
tags: Strap Camera, uyilo, I-Mirror
elilandelayo: Ukususa i-Strap Lug Ukufaka kwiiKhamera ze-Fujifilm (ngokuzikhethela)